स्थानीय सरकार एकल तरिकाले चल्दा समस्या आएका छन् | Sindhu Jwala
Tuesday, 18, January, 2022
स्थानीय सरकार एकल तरिकाले चल्दा समस्या आएका छन्
आङछिरी शेर्पा -अध्यक्ष_ भोटेकोशी गाउँपाटि कमिटि तथा जिल्ला समिति सदस्य नेकपा सिन्धुपाल्चोक
यो बर्ष पनि जिल्लाका भोटोकोशी तथा बाह्रबिसे लगाएत क्षेत्रहरु बाढी पहिरोको चपेटामा परेका छन् । २०७३ सालको जुरे पहिरो तथा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प यता यो क्षेत्रले निकै ठूलो जोखिम र जनधनको क्षति व्यहोरी रहेको छ । बाढीपहिरोका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको भोटेकोशी गाउँपालिकाको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? स्थानीय पार्टीकमीटीहरुले कसरी समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छन भन्ने सन्दर्भमा नेकपा जिल्ला कमिटि सदस्य तथा भोटेकोशी गाउँपार्टीका अध्यक्ष आङछिरी शेर्पासंग सिन्धुज्वाला अनलाईनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– सम्पादक
१) बाढीपहिरोबाट निकै प्रभावित भोटेकोशी गाउँपालिका भरिको अवस्थाको बारेमा बताईदिनुहोसन कस्तो छ पहिल्लो अवस्था ?
यतिबेला भोटेकोशीबासी शोकमा र पीडा त्रासमा छन् । पाँचै वडा बाढी पहिरेको उच्च जोखिममा छ । सयौं घरपरिवार आफ्नो बासस्थान छाडेर केही सुरक्षित स्थानमा बसेका छन् । २० भन्दा माथि घरहरु पुरिएको केही भोटेकोशी नदीमा मिसिएका छन् । अरनिको राजमार्ग अन्य गाउँ जाने सडकहरु, फोन सम्पर्क र विद्यूत देखि भोटेकोशी टाडिएको छ । जनधनको क्षतिमा भोटेकोशी संघर्ष गरिरहेको छ ।
२) बर्षेनी बाढीपहिरोको कारण भोटेकोशीमा ठूलो जनधनको क्षति भईरहेको छ । गत सालको तुलनामा यसपटकको क्षतिलाई कसरी आंकलन गर्नुभएको छ ?
गत सालको तुलनामा यसवर्ष अलि छिटै वर्षा हुन सुरु भएको हो । पानीको मात्रा पनि अत्यधिक परिरहेको छ । भूकम्पले कच्चा पारेको जमिन त्यही जमिनमा अव्यवस्थित कच्ची नयाँ पुरानो ग्रामीण सडकले गर्दा अझ पानी पर्ने क्रम नरोके धेरै जनधनको क्षति हुने देखिन्छ ।
३) पछिल्लोपटक सो क्षेत्रमा भएको बाढीपहिरो घटनामा उद्वार र सहयोगको नाममा तडकभडक मात्र देखियो भन्ने आरोप छ नी ?
यहाँले हेलिकप्टेरको विषय उठाउनु भएको जस्तो लाग्छ । सबै हेलिकप्टर उतिकै अनवाश्यक भन्ने त होइन तर अलि शानको रुपमै प्रयोगहरू चै भएको पक्का हो । घाईतेको अवस्था चिन्ताजनक हेलि प्रयोग हुँदा जीवन बचाउनु सक्छ भने मात्र प्रयोग भएको भए राम्रो हुने थियो ।
४) वर्षा सुरु भएसंगै दैनिकी जसो बाढीपहिरोका घटना भईरहेका छन् . यो अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
वास्तवमै यतिबेला स्थानीय बासीहरु एक टोलबाट अर्को टोलमा जानु पनि निकै जोखिम पूर्ण तरिकाले हिँडिरहेका छन् । एकातिर कोभिडको त्रासमा छन् भने अर्को बाढी पहिरोको जोखिमले गर्दा मानसिक नै तनावमा छ । तत्काल जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुमा त्रिपाल हाल्ने अन्य पहिरो संरक्षण गर्ने विधिहरु प्रयोग नगरे धेरै जनधनको क्षति हुने चिन्ता छ ।
५) पछिल्लो घटनापछि बाढीपहिरो जोखिम ठाउँहरुमा उद्वार र राहतमा कतिको प्रभावकारिता भईरहेको छ ?
सुरुवती उद्धार ठिकै थियो । पछिल्लो चरणमा उद्धार र राहतमा जति हुनु पर्ने त्यति प्रभावकारी भएको छैन !
६) यहाँ नेकपाको जिल्ला कमिटि सदस्य तथा भोटेकोशी गाउँपार्टी कमिटिको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । पार्टीको तर्फबाट कतिको सहयोग भएको छ । स्थानीय तहमा यहाँहरुले नी ?
एउटा संगठनको सिपाही भएको नाताले पार्टी जनताको सुख दुःखको सारथी हुनुपर्छ नै मैले पनि घटना घटे लगतै स्थानीय पार्टीको कमरेडहरुसंग समन्वय गर्दै सकिने जति उपलब्ध कार्यकर्ताहरु परिचालन ग¥यौं । कार्यालय टिममा सल्लाह गरेर विज्ञप्ती निकाल्दै आम पालीका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई र तीनै तहको सरकारलाई उद्धारमा लाग्न अनुरोध ग¥यांै ।
७) स्थानीय पार्टी कमिटि र स्थानीय सरकार बीच त्यति तालमेल मिलेको छैन भन्ने बाहिर चर्चा छनी वास्तविकता के हो ?
पद भनेकोनै कार्य गर्नु हो, कार्य एकल तरिकाले अगाडी बढ्दा समस्याहरु आएका छन् । म अलि युवा पनि छु विशेषगरी युवाहरुको र अन्य कार्यकर्ताहरु पनि अध्यक्षको हिसाबले सहज पनि मानेर धेरै कुरा म र पालिका कमिटीमा आउँछन तर स्थानीय सरकारमा रहेका कमरेडहरु पार्टी र सरकार भनेको छुटै तरिकाले चल्ने हो भन्ने बुझाईले केही समस्याहरु आउँछन् । त्यही पनि हामीले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुमा लागि रहेको छौं ।
८) त्यसोभए स्थानीय पार्टीसंग यहाँहरुले समन्वय र समझीदारी कसरी कायम गर्नुभएको छ त ?
स्थानीय सरकारको त समन्वय भन्ने खासै छैन । फेरी सरकारको सबै प्रतिनिधिहरुलाई दोष दिने पक्षमा त म छैन । तैपनि पार्टीको तर्फबाट विस्तारै जनमुखी बनाउनुमा छलफल बैठक गरिनै रहेको छौ ।
९) वर्षेनी सो क्षेत्र बाढीपहिरोका घटनाले जनधनको क्षति भईरहेको छ । यो रोक्न स्थानीय सरकार र पार्टीकमिटीले दृघकालिन बस्ती स्थान्तरण लगाएतका योजना किन बनाउनु भएन ?
गएको सालहरुमा पार्टी कमिटी, स्थानीय तह सम्म एकता नभएको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । तर पनि हामीले स्थानीय सरकारलाई अलि छलफल गरेर योजनाहरु बनाउँ नभनेको होइन । यो वर्षको निति कार्यक्रममा त मेरो संयोजकमा हाम्रो पार्टीको जनप्रतिनिधिहरु सहितको सुझाब कार्यदल बैठक राखेर नै लिखित सुझाब दिइयो तर सरकारमा भएको साथीहरुले पछि छलफलमा समेत पार्टीले दिइएको विषयहरु ल्याईएन भन्ने सुन्नामा आएको छ । यसबाटनै प्रष्ट हुन्छ नि होईनर ?
१०) पार्टीको तर्फबाट आगमी योजना ?
पार्टीको तर्फबाट आगमी योजनाहरु माथिल्लो कमीटीले धेरै विषयमा निर्देशन आउने नै छ । यो विपत्तिमा हामीले पालिका कमिटीको कमरेडहरुलाई हात फैलाउँदै केही सामाग्रीहरु र नगद समेत पीडितहरुलाई सहयोग ग¥यौं । अझ पनि आम कार्याकर्ताहरुलाई आर्थिक भौतिक सहयोग संगै भोटेकोशी बासीको दुःखमा सारथी बन्न आव्हान गर्दै परिचालन गर्नका लागि स्थानीय सरोकार वालालाई जवाफदेही बनाउँदै समन्वय सहकार्य गरी गाउँपार्टी कमिटीले योजनाहरु बनाउने नै छ ।
११) अन्त्यमा यस अनलाईन मार्फत यहाँको थप भनाई केही छ की ?
अन्तमा, तपाई र तपाईको यो अनलाइनलाई धन्यवाद दिंदै बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरु प्रति श्रदाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारमा समवेदना सहित उपचार्थ घाईतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । सबै भोटेकोशी बासीहरुमा संयमित संगै सुरक्षित हुन अनुरोध समेत गर्दछु । धन्यवाद
This entry was posted in स्थानीय तह, अन्तर्वार्ता, भोटेकोशी गाउँपालिका. Bookmark the permalink.
बागमति प्रदेश सरकारद्वारा बाह्रबिसे नगरपालिकालाई १५ लाख सहयाेग
पाँचपोखरी थाङपालको ८७ औं कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न,
बाह्रविसे नगरपालिकाद्वारा जथाभावी सामग्री वितरणमा रोक
मानवअधिकार दिवस कार्यक्रममा शिक्षाको अवस्था बारे अन्तरक्रिया
सामाजिक बिकास मन्त्री दुलालद्वारा अस्पतालकाे छड्के अनुगमन
जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिले ग¥यो यस्तो निर्णय, जनस्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न अपिल
घिच्चेत उसिदुम माविलाई चन्दादाताहरुको सहयोग, एकैदिन १७ लाख भन्दा माथि संकलन
चोरी निन्त्रणमा प्रहरीको सफलता, दुईसातामै चोरीका सामान सहित संलग्न पक्राउ